Mandritra ny fivanihian’ny papa François: hapetraka ny fepetra tsy hiparitahan’ny valanaretina | NewsMada
Mandritra ny fivanihian’ny papa François: hapetraka ny fepetra tsy hiparitahan’ny valanaretina
“Ho fiomanana amin’ny fitarehana ny fahatongavan’ny papa François eto amintsika (ny 6-10 septambra), misy ny lamina napetraka hiarovana ny fahasalaman’ny vahiny avy amin’ny faritra sy ireo avy any ivelan’ny Nosy”, hoy ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny Fahasalamana, Andrianirinarison Jean Claude, omaly teny Ambohidahy.
Hisokatra avokoa ny CSB sy ny hopitalim-panjakana rehetra, indrindra eto Antananarivo, sy amin’ireo lalam-pirenena andalovan’ny fiara hitatitra ny vahiny hiakatra aty an-dRenivohitra, manohana ny hetsika ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety. 150 ny mpitsabo manana fahaizana manokana momba ny fandraisana an-tanana anaty hamehana hahetsika miaraka amin’ny mpitsabo sy ny “paramédicaux”. Miatrana sy miasa avokoa ny mpitsabo sy ny mpiasan’ny fahasalamana mialoha sy mandritra ary aorian’ny fandalovan’ny papa mandra-piverin’ny vahiny any amin’ny toerana niaingany.
Eny Soamandrakizay-Androhibe, misy toerana hametrahana ny fiara ambulance 20, ny fiara hopitaly afaka mivezivezy ary ny tranoheva handraisana ny marary. Miara-miasa amin’ny mpiasan’ny fahasalamana koa ny mpamonjy voina manana traikefa amin’ny hamehana samihafa.
Misy ekipa medikaly isaky ny distrika
Fotoana mampirongatra ny valanaretina ny volana septambra (pesta…), hapetraka ny fepetra hanaraha-maso ny fahasalaman’ny olona miditra sy mivoaka ny faritra Analamanga. Hisy rafitra ahitana ekipam-pahasalamana isaky ny distrika.
Tsy latsaky ny 1 tapitrisa ny olona andrasana hanatrika ny lamesa lehibe sy ny fitsidihana ataon’ny papa François, 21 ny toeram-pandraisana ny vahiny avy any amin’ny faritra ary efa voaomana ny lamina. Tokony handefa ny isan’ny delegasiona amin’izay ny diosezy (21) isanisany ahafahan’ny aty amin’ny foibe mandrindra ny asa. Mila mivonona amin’ny fitafy mafana ireo hanatrika ny alim-bavaka ary hitondra fiarovana amin’ny masoandro mandritra ny lamesa lehibe ny alahady. Arahi-maso akaiky koa ny fikarakarana ny sakafon’ireo vahiny satria saropady ny kalitao sy ny fahadiovana. “Vonona ny lafiny fahasalamana handray ny vahiny”, hoy ny nambarany.